Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo ka qeyb galay munaasabada lagu xusayey Maalinta Umulisada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo ka qeyb galay munaasabada lagu xusayey Maalinta Umulisada.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo ka qeyb galay munaasabada lagu xusayey Maalinta Umulisada.
Munasabadaan oo lagu xusayey maalinta Calmiga ah ee Umulisooyinka Adduunka isl markaana ay ku qalin jabinayeen gobdho bartay Cilmiga umulisanadda ayaa manta lagu qabtay xaruunta tababarka Ciidanka Soomaaliyeed ee Gen Kaahiye ee Magaladda Muqdisho .
Munasabada o ay soo qaban qaabisay wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka bulshada ayaa waxa ka qayb galay Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Wasiirka Caafimaadka, Wasiru Dowlaha Xafiiska Ra’isiul Wasaaraha Cabduulahi Xamud , Xildhibaano , Dhaqatiir iyo Marti Sharaf kale .
Wasiirka Caafimaadka ee Xukuumadda Federalka ah ee Soomaaliya Fowsiya Abiikar Nuur ayaa uga mahad celisay Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda ka soo qaybgalk munasabadaan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali kheyre ayaa ugu horayn hambalyo iyo dar-daaran u diray gabdhaha bartay cilmiga Umulinso-nimada waxa uuna cadeeyey in haweenka soomaliyeed ay hormuud ka ahaayeen bad-baadinta umadda Sooomaaliyeed xiligi adkaa ee dalka soo maray .
Mudane Xasan Cali Kheyre Ra’iisul wasaaraha dalka ayaa ugu baqayn haweenka soomaalieed in ay horseed an daalin u noqdaan horumarka dalka.
Previous articleMadaxweynaha JFS oo hadda kulan la leh bulshada ku dhaqan Degamada Afgooye
Next articleShirweynihii Qaran ee Wada tashiga Isgaarsiinta iyo Tignoolojiyada oo Maanta lasoo gababeeyey.